Eshibhile UKWAKHA izingxenye carbon steel ifektri kanye nabaphakeli | I-Ouzhan
I-Carbon steel i-iron-carbon alloy enokuqukethwe kwekhabhoni okungu-0.0218% kuya ku-2.11%. Ebizwa nangokuthi i-carbon steel. Ngokuvamile, iqukethe nenani elincane le-silicon, i-manganese, isulfure ne-phosphorus. Ngokuvamile, ukuphakama kokuqukethwe kwekhabhoni yensimbi yensimbi, kukhula ubunzima kanye namandla amakhulu, kepha ukwehla kwepulasitiki. ICarbon steel CNC ekwakheni isetshenziswa kabanzi futhi ilungele izingxenye eziningi zemishini.
Carbon steel UKWAKHA-ngokunemba carbon steel UKWAKHA izingxenye machining isikhungo
Ouzhan ngeke efanele oyifisayo machining izingxenye ngokuvumelana imidwebo yakho kanye nezidingo. UKWAKHA kuyindlela yokucubungula esebenzisa imishini yokwakha ukufaka ingcindezi ezikhaleni zensimbi ukukhiqiza ukusikeka kwepulasitiki ukuthola ukukhohlwa ngezinto ezithile zomshini, ubujamo nobukhulu obuthile. UKWAKHA (UKWAKHA nokugxusha) kungenye yezinto ezimbili ezinkulu. UKWENZA ukukhiqizwa kungenye yezindlela eziyinhloko zokucubungula ukuhlinzeka ngezingxenye zemishini embonini yokukhiqiza imishini. Ngokufaka, kungatholakali ukwakheka kwezingxenye zemishini kuphela, kepha futhi nokwakhiwa kwangaphakathi kwensimbi kungathuthukiswa, futhi izakhiwo zemishini nezomzimba zensimbi zingathuthukiswa. Ngokuvamile, izingxenye zomshini ezibaluleke kakhulu ezinengcindezi ephezulu nezidingo eziphakeme zenziwa ngokwakha izindlela zokukhiqiza. Izingxenye ezibalulekile ezifana nemiphini ye-turbine generator, ama-rotor, ama-impellers, ama-blades, izindandatho zokuqapha, amakholomu amakhulu wokucindezela u-hydraulic, amasilinda acindezela kakhulu, ama-roll rolls, izinjini zangaphakathi zomlilo, izinduku zokuxhuma, amagiya, amabhere kanye nezikhali embonini yezokuvikela wonke umkhiqizo owenziwe ngomgunyathi.
Izinzuzo carbon steel kokuzihlanganisa izingxenye
- Qinisekisa ukuqhubeka kwenhlangano yensimbi yensimbi
- Kuthuthukiswe izakhiwo ezibonakalayo zensimbi
- Thuthukisa izakhiwo zepulasitiki nezomshini zensimbi
- Umjikelezo wokukhiqiza okusheshayo, ukulethwa okusheshayo
OEM ngokwezifiso carbon steel UKWAKHA service-China Shanghai CNC carbon steel UKWAKHA izingxenye nomkhiqizi
I-Ouzhan ngumkhiqizi ohlanganisa imboni kanye nezohwebo, enikezela ngosizo olulodwa lokuguqula nokwenza izinsizakalo zomshini wokugaya umshini. Ngokuya ngezidingo zamakhasimende, ingacubungula insimbi yekhabhoni enezingxenye ezizinzile nezinokwethenjelwa ezinemba kakhulu ze-CNC. Lezi zingxenye zemishini zenziwa kusetshenziswa izinto ezisezingeni eliphakeme kakhulu zokusetshenziswa, ezitholakala kubahlinzeki bezingxenye ezisebenza kahle emakethe.
Ithimba lethu lobuchwepheshe eliqinile nelingcweti kanye nokuphathwa kahle nokusebenza kwesistimu kungaqinisekisa ukukhiqizwa okuhle kwekhabhoni yensimbi ekwakheni izingxenye zemishini. Ngaphezu kwalokho, i-CNC yakha imikhiqizo yensimbi yekhabhoni enikezwe ngokuhambisana nezindinganiso zekhwalithi futhi ingasetshenziswa ezinhlelweni ezahlukahlukene zezimboni. Futhi singahlinzeka ngamanani entengo wokuncintisana wekhabhoni yensimbi ye-CNC imikhiqizo yokwakha kumakhasimende ethu abalulekile.
Ouzhan carbon steel kokuzihlanganisa izingxenye ukucutshungulwa izingxenye izinzuzo
(1) UKWAKHA kufanelekile ukucubungula izindawo ezijikelezayo ezingaphakathi nezangaphandle. Ububanzi bokufaka ukucubungula ukunemba yi-zhiIT13, i-IT6, futhi ubukhulu be-Ra value ngu-12.5 ～ 1.6.
(2) Ithuluzi lokujika linesakhiwo esilula nokwenziwa okulula, okulungele ukukhethwa okufanele kwethuluzi lezinto ne-engeli yejiyomethri ngokuya ngezidingo zokucubungula. Kubuye kube lula ukucija nokuhlanganisa nokuqaqa amathuluzi okuphenduka.
(3) UKWAKHA has nezimo eqinile isakhiwo, impahla, ukukhiqizwa batch, njll workpiece, futhi lisetshenziswa kabanzi. Ngaphezu kokwenza izinsimbi ezahlukahlukene, insimbi yensimbi, nezinsimbi ezingezona ezensimbi, ingakha nensimbi okungeyona i-fiberglass, i-bakelite, inayiloni njalonjalo. Kwezinye izinsimbi ezingezona i-ayoni ezingakulungele ukugaya, amathuluzi wokuguqula idayimane angasetshenziselwa ukwenza okokuthambisa okuhle, okungathola ukunemba okuphezulu kwemishini namanani amancane okuganga ebusweni.
(4) Ngaphandle komkhawulo wobuso ongalingani wokungenalutho, ukukhohlwa okuningi kungukusika okuqhubekayo okunesigaba sokusika esilinganayo. Ngakho-ke, amandla okusika ashintsha kancane, inqubo yokusika izinzile, evumelana nokusika ngesivinini esikhulu nokusika okunamandla, futhi inokusebenza kahle kokukhiqiza.
Izinzuzo ze-Ouzhan Carbon Steel Forging Service
- Amandla wokukhiqiza aphezulu nentengo yokuncintisana.
-Konke ukunemba kwe-CNC okwakhiwe imikhiqizo yensimbi yekhabhoni kukhonjelwe ekuhlolweni okuqinile kwekhwalithi.
- Isevisi yokuveza i-OEM ingaqinisekisa ukuthi uthola imikhiqizo oyifunayo, ukusekela i-DDP, i-CIF, i-FOB nezinye izindlela zokuhamba ukuqinisekisa ukuthi amakhasimende angazithola izimpahla ngokuphepha.
- Ngokuya ngemidwebo noma amasampula wokwenza ngokunemba izingxenye zensimbi zekhabhoni.
Langaphambilini Izingxenye ze-OEM Hot Extrusion
Olandelayo: Kwenziwe ngentando carbon steel kokuzihlanganisa izingxenye
Izingxenye Foring insimbi engagqwali
Kwenziwe ngentando insimbi engagqwali kokuzihlanganisa izingxenye mechani ...